Fahalalahàna miteny · Febroary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Febroary, 2011
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Febroary, 2011
Kambodza: Iza no nanome baiko amin'ny fanakanana ireo vohikala mpanohitra?
Azia Atsinanana 28 Febroary 2011
Hatramin'ny Janoary, misy ireo vohikala sasany manohitra ny governemanta tsy afaka hidirana any Kambodza. Milaza ireo mpandrindra ny raharaha fa noho ny fahasimbana ara-teknika izany raha milaza kosa ny governemanta fa tsy manao fanivanana izy. Kanefa namoaka taratasy fangatahan'ny governemanta ireo tamban-jotra mba hanakana ireo vohikala maro ny vondron'ny media.
Bahrain: Fanambarana ofisialy ny Andro Fisaonana
Androany no manamarika ny andro faha-10 amin'ny tolona Andron'ny Hatezerana any Bahrain. Rahampitso no manamarika ny andro fisaonana ho an'ireo izay namoy ny ainy tamin'ireo mpitandro filaminana sy miaramila nanafika ny mpitolona.
Bahrain: Zara raha niova ireo Ministera
Nambara ireo fanovàna minisiterialy tany Bahrain ny alina lasa mba hampitony ireo mpanohitra miantso ny fanavaozana hatramin'ny 14 Febroary. Ireto misy fihetseham-po mlikasika ireo fanovàna ireo, izay mbola tsy voalaza ofisialy.
Ejipta: Ho Bokotra Fampandehana Indray Ny Revolisiona Ejiptiana Ve Ny 25 Feb?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 27 Febroary 2011
Ny omaly no nanamarika ny volana voalohany nanombohan'ny revolisiona Ejiptiana. Voaongana ny filoha teo aloha Hosni Mubarak, saingy tsy mbola vita akory ny revolisiona. Ireo mpanaofihetsiketsehana ao amin'ny kianja Tahrir izay mangataka ny hanatanterahana ny fitakiany dia nohodidinina sy naparitaky ny polisin'ny tafika. Ho fiandohana onjan-kerisetra vaovao indray ve izany?
Serbia: Fihetseham-po noho ny Tantaran'ireo Serba Mpikarama an'ady Any Libya
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Febroary 2011
Raha ny azo avy amin'ny loharanom-baovao sasany, dia nandray anjara tamin'ny fandarohana baomba ny mpanao fihetsiketsehana Libiana ny mpanamory fiaramanidina Serba. Nadikan'i Sasa Milosevic ny fihetseham-po vitsivitsin'ireo Serba mponina amin'ny aterineto momba ity tsaho ity
Côte d'Ivoire: Famoretana tan-Kerisetra an'Ireo Hetsika an-Dalambe
Afrika Mainty 25 Febroary 2011
Taorian'ny fitsaharana kely, mifantoka amin'i Cote d'Ivoire indray izao ny sain'ireo mpampita vaovao manerantany. Tato anatin'ny dimy andro dia niaina herisetra mivaivay indray ny firenena ary fihamafisan'ny resak'ireo mponin'ny aterineto Ivoariana.
Arabia Saodita: Ny fiverenan'ny Mpanjaka Abdullah
Niverina nody ny mpanjaka Saodiana Abdullah bin Abdulaziz omaly alarobia 23 febroary 2001, taorian'ny telo volana nitsaboana tena tany ivelany . Nanomboka tao amin'ny Hopitaly Presbyteriana ao New York ao Etazonia ny fitsaboana azy, ary notohizany tany Maraoka ny fanamafisana ny fahasalamany. Nanantena fiovana matotra ara-politika sy ara toe-karena ireo Saodiana, nifanojo...
Iran: Tandindonin-doza i Hossein Ronaghi, mpitoraka bilaogy voafonja
Ilay mpitoraka blaogy Iraniana Hossein Ronaghi Malki dia manefa sazy 15 taona an-tranomaizina any amin'ny trano tsara aron'ny Fonjan'ny Evin, tsy mahazo mifandray amin'ny fianakaviany na ny mpisolo vava azy. Mojtaba Samienejad, mafana fo mpiaro ny zon'olombelona sady sekreteran'ny Trano Misahana ny Zon'olombelona any Iran, dia nilaza tamin'ny BBC Persiana fa mila fandidiana maika i Ronaghi ary efa ahiana mafy ny toe-pahasalamany.
Tontolo Arabo: Mitohy ny fitroàrana
Fotoan'ny revolusiona izao manerana ny tontolo Arabo, miaraka amin'ny vahoaka mijoro sy miantso fiovàna ara-politika, ekonomika sy ara-tsosialy. Fifanatonana, fanaovana fihetsiketsehana sy fanoherana manerana ny faritra no mameno ny fandaharam-potoanantsika, miaraka amin'ny vaovao mahavaky fo amin'ny fomba ataon'ny governemanta Arabo iray aorian'ny fampiasan'ny iray ny paikady mitovy hamdravàna ny fanoherana sy ny hampanginana ny feon'ny mpanohitra. Ireto misy fihetseham-po avy amin'izao tontolo izao manaraka ny fandehan'ny revolisiona eo amin'ny faritra
Bahrain: Afaka ilay Bilaogera Ali Abdulemam
Ela ny ela fa dia tafavoaka ny fonja ihany ilay blogger Jailed Bahraini Ali Abdulemam. Ampifaliana no nandraisan''ireo mpankafy azy manerantany izany vaovao izany, ra iny tazany tamin'ny alalan'ny an-tserasera iny ny sariny notsenain'ny fianakaviany sy ny namany.